အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: မန္တလေး-၂- (၁၅ ရက် ဇွန် ၂၀၁၀ ခုနှစ် အင်္ဂါ)
ဇူလိုင် ၁၉ တုံးက တချို့သူငယ်ချင်းတွေက ဂျီတော့ မက်စေ့ခ်ျမှာ အာဇာနည်နေ့လို ရေးထားကြပါသတဲ့ အဲ့တာကို ကလေးတချို့က ဘာလဲ ဒီနေ့ က အာဇာနည်ရဲ့ မွေးနေ့ လားလို့ မေးပါသတဲ့ ကျုပ်ကတော့ ဟစ်လို့သာ အော်ငိုချင်တော့တာပဲ ကိုယ်တို့ ဂျင်နရေးရှင်း ကိုဆိုးလှပြီထင်နေတာ ဒါကိုသာ ကိုယ်တို့အတွက် လုပ်နေတာ လို့ အော်နေကြတဲ့ လူတွေကြားရင် ဒန်းများစီးချင်ကြမလားဘဲနော်....ထားတော့ -(၂) ကိုယ်လဲ အဲ့လိုကြားရတာတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး...သူတို့လေးတွေက ဂဠုန်ဦးစောဆိုတာကိုလဲမသိကြဘူးဆိုရင်လဲ ကိုယ်ကတော့ အံ့သြမယ်မဟုတ်ဘူး...........
နောက်တခုပါ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဓညင်းသီးပါ သကြားလေးနဲ့ ပြုတ်ထားတာပါ အရမ်းကြီးမစေးပါဘူး မွှေးတေးလေးနဲ့ စားကောင်းပါတယ် ကိုယ်က ထုံးစံအတိုင်းစားချင်ပါတယ် မှာပါတယ် တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ ၇ လုံးတိတိပါပါတယ် မြန်မာငွေ ငဝက် ၅၀၀ ကျပ်ပါ ဆိုင်ရှင်က ပြောပါသေးတယ် အဆိုတော် ကြိုးကြာ က တခါလာရင် အလုံး ၅၀ စားပါသတဲ့ ကိုယ်က ဆယ်တန်း (အဲလေ တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း)တုံးက သင်္ချာ ၉၇ မှတ်ရတဲ့အတွက် (အရင်ပိုစ့်မှာ ကြွားပြီးသားပါ) တွက်ကြည့်မိပါတယ် ၇လုံး ၅၀၀ အလုံး ၇၀ ၅၀၀၀ အော် ကြိုးကြာလေးက ၄ ထောင်ဖိုးလောက်တောင် ဓညင်းသီးစားတာပဲလို့လေ သူ့ရည်းစား ကိုယ်စားတောင် ကိုယ်က မဆီမဆိုင် စိတ်ပူမိပါသေးတယ် ထားတော့-(၅)...
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်တို့ ရွှေမန်းမြို့ရဲ့ မနက်စာမှာ ၆၅၀၀ ကျပ် ရှင်းလိုက်ရပါတယ် ရှိစေတော့ ရှိစေတော့ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ် ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့လမ်း လေနော်............ထားတော့-(၆)
Posted by တီချမ်း at 6:08 PM
:P July 22, 2010 at 7:17 PM
စားလို့ သိပ်မကောင်းဘူးပြောပေမယ့် ကြည့်ရတာ စားလို့ သိပ်ကောင်းမယ့်ပုံပဲ.. တုတ်ထိုး၊ နန်းကြီးသုတ်၊
thu July 22, 2010 at 7:52 PM
commentပေးဦးမလို့ပဲဒါပေမယ့် ထားတော့ - (၁၂) :)
Rita July 22, 2010 at 8:04 PM
အန်တီချမ်း July 22, 2010 at 10:00 PM
ဒီလိုလေ :P ရဲ့
စားလို့ သိပ်မကောင်းဘူးဆိုတာ က တီလုပ်တာ က ပိုကောင်းလို့ပေါ့
ဒေါ်ရီတာ နောက်နေ့ ကျ တင်ပေးမယ်
မုန့်တီ လုပ်နည်း ခိစ်
Christine August 3, 2010 at 12:03 PM
Is it Soe Soe Mote Ti?
အန်တီချမ်း August 3, 2010 at 1:13 PM
i don't know the name of the shop but may be
From the look of the photo..It is 'Soe Soe'Mont T. The shop is inside the block (not on the road side), is it? 31st St, bet:84thx85th St. Last time, General(army) from Yangon also ordered like Arzarni.
တီချမ်း February 20, 2012 at 6:46 PM
ဟုတ်တယ် အာဇာနည် က ရန်ကုန်ကနေ မှာစားတာတဲ့ ကြိုးကြာက ဓညင်းသီး အလုံး ၅၀ စားတာတဲ့ ပြောတာပဲ ကောင်းတာတော့ ကောင်းတယ် သို့သော် တီလုပ်တာလောက်တော့ မကောင်း ငှဲငှဲငှဲ
Taste to decide good 'Mote T' or not is mostly depend on bean powder. Most of the 'Mote T' shop in Mandalay is very careful on choosing bean powder. I saw 'Hmwe bean powder' in your previous 'Mote T' post. Next time, pls try other brand. Then your 'Mote T' will be more fantastic.
WD (Mandalay Thu)
တီချမ်း February 21, 2012 at 2:41 PM
but here we only access to mhwae barely access to other brands